Guriceel oo laga cabsi qabo Dagaal mar kale ka qarxo Magaalada iyo Gurmadyo gaaraya Magaaladaasi+ Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Guriceel oo laga cabsi qabo Dagaal mar kale ka qarxo Magaalada iyo Gurmadyo gaaraya Magaaladaasi+ Cod
Wararka ka imaanaya Magaalada Guriceel ee Gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in saakay halkaasi laga dareemayo xiisado xoogan, waxaana laga cabsi qabaa in magaalada ay mar kale ka dhacaan dagaalo ay dhiig ku daataan.
Ciidamo katirsan Ahlu Sunna Waljameeca ayaa hada gacanta ku haya maamulka Magaalada Guriceel, waxaana magaalada laga saaray oo duleedkeeda isku aruursanaya ciidamadii katirsanaa Dowlada ee horey ugu sugnaa magaaladaasi.
Laada ciidan ayaa helaya gurmadyo kala duwan oo xoojinaya, waxa ayna sheegayaan dad ku sugan Magaalada Guriceel in ay muuqato saan saan colaadeed lagana cabsi qabo in mar kale uu dagaal dhax maro dhinacyadii shalay dagaalamay.
Dagaalkii shalay ka dhacay Magaalada Guriceel waxaa ku dhintay ku dhawaad 20-qof oo isugu jira shacab iyo dhinacyadii dagaalamay, waxaana jira dhaawacyo badan oo iyana ka dhashay dagaalkaasi shalay ka dhacay Guriceel.
Ma jiro ilaa hada wax war ah oo kasoo baxay dhanka Dowlada Soomaaliya oo ku aadan dagaalka ka dhacay Guriceel, waxa ayna Saraakiil katirsa Ahlu Sunna oo dagaalka ka hadlay sheegeen in ay la dagaalameen Maleeshiyaad iyo kooxo Burcad badeed ah.
Ma muuqato waan wana nabadeed oo lagu qaboojinayo dagaalka laga cabsi qabo in mar kale uu ka qarxo Magaalada Guriceel, waxaana colaada ka aloosan Guriceel ay imaaneysaa xili uu shalay safar ku tagay Magaalada Dhuuso Mareeb Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
HALKAN KADHAGAYSO HADALKA AF HAYEENKA AHLUSUNA